Miisaaniyadda Dawladda ee Xlliga Dayrta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Miisaaniyadda Dawladda ee Xlliga Dayrta
Uppdaterat tisdag 12 april 2011 kl 16.50
Publicerat tisdag 12 april 2011 kl 13.29
Dhaqaalaha dalka Iswiidhen ayaa ku socda xawli aad u sareeya iyadoona ay khasnadda dawladda ku soo dhacayso macaash fara badan ee wax looga qaban karo hoowlaha dawladda hor-yaala iyo ballammadii ey ku doorasho gashay. Sannadka foodda innagu soo haya ee 2012 ayaa la saadaalinayaa in khasnadda dawladda ay soo gasho dhaqaale gaarsiisan 25 milyaardi oo dheeriya.
Iyadoona miisaaniyadda dawladdu soo bandhigi doonto berito oo arbaca ah lagu caddeeyn doono hoowlaha dawladdu xoogga saari doonto sidii loo miisaaniyad gelin lahaa sannadka foodda innagu soo haya ee 2012. Howlahaasi ayey ka mid yihiin qidmadda mushaarooyinka oo la dhimo markii shanaad. Iyo sidoo kale cashuurha dadyoowga howl-gabka ku sugan oo iyagana la filayo in xaaladdoodda wax laga badali doono, sida ku caddeeyd maqaal ey saaka ku soo daabaceen hogaamiyeyaasha afarta xisbi ee isku-tagga ee ku bahoobay ama gacanta ku haya talada dalka.
Qidmadda oo laga dhimo maqaayadaha iyo shirkadaha mulkida loo leeyahay ee cunnada waarida ayaa sidoo kale la filayaa in la hir-geliyo bilowga sannadka foodda innagu soo haya. Waana fikir ay soo ban-dhigtay wasiirka manaafacaadku Maud Olofsson, intii lagu jiray kaltankii doorashadda ee sannadkii tagay.
Maal-gelinta dawladda ayaa la qiyaasayaa iney ku kici doonto miisaaniyad gaarsiisan 33 milyaard ee koronka iswiidhishka iyadoona 10 milyaard oo ka mid ahina horeyba loo ballan qaaday hoowlihii lagu bixin lahaa. Iyo sidoo kale in horay loogu qoondeeyay miisaaniyad gaarsiisan 800 oo malyuun in la geliyo waddooyinka xadiidka ee tareemmada. Haddii khasnadda dawladda ee sannadka 2012 uu soo geli doonaan dhaqaale dheeriya ee gaarsiisan sida la saadaalinayo 25 milyaard oo koron, sidee haddaba noqon doonaan sannadaha 2013 iyo 2014. Mats Dillén, ahna madaxa machadka dhaqaalaha ayaa sidan uga jawaabay middaa.
- Kor u kaca dhaqaale ayaa u eg mid gaari doona heerka la saadaalinayo ee boqolkiiba hal miisaaniyadda, middaasina oo laga qabo rajo wanaagsan. Middase wel-welku ka taagan yahay waxa tahay tirada sareeysa ee shaqa la’aanta oo gaarsiisan qiyaastii 8%. Waana hoowlo loo baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa laguna maal-gelin lahaa 25 milyaard ee la filayo sannadka foodda innagu soo haya ee 2012. Sidaasi oo ay tahayna waa wax adag in dhab ahaan la saadaaliyo.
Saadaalada dhaqaale ee sannadaha ka dambeeya ayaa iyaguna u muuqda kuwo wanaagsan, sida uu sheegay Mats Dillén. Halka 25-ka milyaard lagu abuuri karo goobo shaqo ee 20-tameeyo kun kor u gaaraya.
Qidmadda mushaarooyinka, kuwa howl-gabka ayaa kor u qaadaya awoodda iibsi ee bulshada iyo sidoo kale in dhimista cashuurta ee maqaayadleydana shaqooyin abuuri karaan, sida uu qabo Mats Dillén:
- Maaha mid shaki laga qabi karo in mustaqbalka dhow ey tallaabooyinka miisaaniyad-gelinta howlahaasi hor-seedi karaan goobo shaqo ee hor leh. Mana ahan mid doodi ka taagan tahay. Halka dhaqaale-yahanku ka doodaan midda la xiriirta mustaqbalka fog. Qidmadda mushaarooyinka oo la dhimaana waa kuwo mustaqbalka dheerna wax ka bedeli kara. Iyadoona aan la oran karin in qidmad-dhanka shanaad aannu noqon doonin mid sidii qidmad-dhimistii ugu horeeysay oo kale.